मैले जीवन कसरी बिताएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्टाइ अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (सिम्बोराजो) केक्ची कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्षोसा ग्रीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार डच डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा तामिल तेलगु त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नेपाली पंगासिनन् पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मले मल्यालम मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रियुनियन क्रिओल रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा वारे-वारे शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिडामा सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोमाली स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
तपाईँले परमेश्‍वरलाई राम्ररी चिनेको र उहाँसित नजिक भएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ। साथै तपाईँले उहाँलाई प्रेम गरेको र आफ्नो सारा मनले सेवा गरेको चाहनुहुन्छ। (मत्ती २२:३७, ३८; याकूब ४:८) येशूको जीवनी र शिक्षाबाट यहोवाको इच्छाअनुसार कसरी चल्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। (यूहन्‍ना ७:१६, १७) येशूले परमेश्‍वरको इच्छाबारे कुरा मात्र गर्नुभएन तर त्यसअनुसार जीवन बिताउनुभयो। उहाँले ‘आफ्नो होइन तर आफूलाई पठाउनुहुनेको इच्छा पूरा गर्नु’ नै जीवनको उद्देश्‍य हो भन्‍नुभयो।—यूहन्‍ना ६:३८.
परमेश्‍वर मबाट के चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न मलाई विशेष चिन्ह, दर्शन वा बोलावट चाहिन्छ?
चाहिँदैन। किनभने बाइबलमा मानिसजातिको लागि परमेश्‍वरको सन्देश पाइन्छ। त्यसमा भएका कुराले “हरेक असल कामका लागि तयार बनाउँछ।” (२ तिमोथी ३:१६, १७) बाइबल अध्ययन गरेर अनि “सोचविचार गर्ने क्षमता चलाएर” परमेश्‍वर तपाईँबाट के चाहनुहुन्छ भन्‍ने कुरा थाह पाउन सक्नुहुन्छ।—रोमी १२:१, २; एफिसी ५:१७.
म परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार चल्न सक्छु र?
पक्कै सक्नुहुन्छ। किनभने बाइबल यसो भन्छ: “[परमेश्‍वरका] आज्ञाहरू बोझिला छैनन्‌।” (१ यूहन्‍ना ५:३) यसको मतलब उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न सधैँ सजिलो हुन्छ भन्‍ने होइन। तर ती पालन गर्न तपाईँले गरेको प्रयासभन्दा त्यसबाट हुने फाइदा कता हो कता धेरै हुन्छ। येशू आफैले यसो भन्‍नुभयो: “धन्य त तिनीहरू हुन्‌, जसले परमेश्‍वरको वचन सुन्छन्‌ र पालन गर्छन्‌!”—लूका ११:२८.
परमेश्‍वर जीवन र मृत्यु बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ
शेयर गर्ने शेयर गर्ने मैले जीवन कसरी बिताएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ?
ijwbq लेख ३८